I-China amagilavu ​​avikelekile ayi-10 ngemininingwane nabakhiqizi bawo bokusebenza abavikelayo nabaphakeli | UJoysun
Amagilavu ​​avikelekile ayi-10 ngemininingwane nokusebenza kwawo okuvikelayo
Isandla siyingxenye ebaluleke kakhulu yomzimba wethu, futhi umsebenzi nempilo akunakwehlukaniswa nakho. Kusukela ngesikhathi esizalwa ngaso, kuze kube sekupheleni kwempilo, izandla bezilokhu zihamba njalo. Kuyadabukisa ukuthi kaningi sikushaya indiva ukubaluleka kwayo nokuvikelwa kwezandla zethu, ukuze ezimbonini zesimanje, izingozi zokulimala kwezandla zikhuphuke kakhulu, kanti ukulimala kwezandla kube yingozi yezandla ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezingozi ezihlobene nomsebenzi ezingama-20%. Le yidatha ethusa kakhulu, ngakho-ke ukukhetha okufanele nokusetshenziswa kwamagilavu ​​okuvikela kuyadingeka kakhulu.
Ukulimala okuvamile kwesandla kungahlukaniswa ngezigaba ezintathu, okungukuthi ukulimala emzimbeni, ukulimala kwamakhemikhali kanye nokulimala ngokwemvelo.
Injury Ukulimala emzimbeni kubangelwa umlilo, ukushisa okuphezulu, ukushisa okuphansi, i-electromagnetic, imisebe ye-ionizing, ukushaqeka kukagesi nezizathu zemishini. Inomthelela omkhulu emathanjeni, imisipha, izicubu kanye nezikhungo, ukuphuka kweminwe okunzima, ukwaphuka kwamathambo neminwe emhlophe, njll.
Damage Ukulimazeka kwamakhemikhali kungukulimazeka esikhunjeni sezandla okubangelwa izinto zamakhemikhali, ikakhulukazi ngenxa yokuchayeka isikhathi eside kuma-asidi nama-alkalis, njengama-detergents, ama-disinfectants, njll, nokuchayeka ezintweni ezithile ezinobuthi ezinobuthi.
Injury Ukulimala kwezinto eziphilayo kulula ukukuqonda, ngokuyisisekelo ukutheleleka kwasendaweni okubangelwa ukulunywa okungokwemvelo.
Indlela yokugwema lokhu kulimala kwesandla ukusebenzisa amagilavu ​​wokuzivikela ngendlela efanele futhi efanelekile emsebenzini. Manje chaza ngokuningiliziwe amagilavu ​​avikelekile ayi-10 ukukusiza ukhethe amagilavu ​​afanele.
Uhlobo lokuqala: amagilavu ​​okuvikela
Amagilavu ​​afakiwe asetshenziselwa umsebenzi obukhoma. Kumandla we-AC ka-10 kV noma imishini kagesi ehambisanayo ye-DC, ukugqoka amagilavu ​​angafakwanga kungenza umsebenzi wokufaka ugesi. Njengesigilavu ​​esivikela, kufanele sibe nezici ezinhle zokuhlukanisa, namandla aqine, ukunwebeka ngesikhathi sekhefu, ukumelana nokubhoboza, ukumelana nokuguga, ukumelana namazinga okushisa aphansi nokumelana nelangabi konke kuhle kakhulu. Ukubukeka nobuchwepheshe begilavu ​​kumele kuhlangabezane nezidingo ze- "General Technical Conditions for Insulated Gloves for Live Working", futhi ukukhiqizwa okuqinile kungafinyelela amandla adingekayo okuvikela ukugwema ukufa ngenxa yokushaqeka ngamandla kagesi.
Uhlobo lwesibili: amagilavu ​​angasiki
Sika amagilavu ​​angamelana ikakhulu asetshenziswa ezimbonini ezinjengokusetshenzwa kwensimbi, izimboni zemishini, imboni yokuhamba ngebhayisikili, imboni yengilazi kanye nemboni yensimbi yensimbi ukuvikela izinto ezibukhali ekugwazweni noma ekusikeni izandla. Isetshenziswa ikakhulukazi i-fiber nokunye ukukhiqizwa kwendwangu enamandla kakhulu, okwamanje okusetshenziswa kakhulu yinkampani yase-US iDuPont Kevlar. I-Kevlar material uhlobo lwe-aramid fiber. Amagilavu ​​angasikeki enziwe ngawo athambile kunemikhiqizo yesikhumba, futhi anokumelana kangcono nokushisa, ukumelana nomlilo, ukumelana nokusika nokugqoka ukumelana. Okwenziwe nge-Kevlar nakho kuyinto ejwayelekile yezikhali zomzimba, futhi ukusebenza kwayo kokuvikela kuthembekile.
Uhlobo lwesithathu: amagilavu ​​avikela amalangabi amelana nokushisa okuphezulu
Amagilavu ​​avutha amalangabi amelana nokushisa okuphezulu amagilavu ​​avikelayo asetshenziswa endaweni enezinga eliphezulu lokushisa, okusetshenziswa kakhulu ekuncibilikiseni izisebenzi zangaphambi kwesithando somlilo noma ezinye izinhlobo zesithando somlilo. Inezinhlobo ezintathu, eyodwa ilangabi elikhubazayo lendwangu njengendwangu yeglavu, kanti phakathi kufakwe i-polyurethane njengogqinsi lokushisa lokushisa; enye yenziwa ngezinto ze-asbestosi njengolwelwesi lokuvikela ukushisa, kanti ingaphandle lenziwe ngendwangu evikela amalangabi njengendwangu; ekugcineni Enye ukufafaza insimbi ngaphezulu kwamagilavu ​​esikhumba, angakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu nelangabi elibuyisa futhi lingakhombisa nokushisa okukhazimulayo. Izinga lokushisa eliphakeme elingamelana nelangabi eligcina amaglavu liyatholakala ngosayizi abathathu, abakhulu, abaphakathi nabancane, abahlukaniswe ngohlobo lweminwe emibili nohlobo lweminwe emihlanu.
Okwesine: amagilavu ​​we-anti-static
Amagilavu ​​ama-anti-static ngokuvamile akhiwe ngezinto ezilukiwe eziqukethe imicu ehambisanayo, futhi kungenziwa futhi nge-fiber ende nokunwebeka kwe-acrylic eluka. Uhlobo lwesibili lweglavu ludinga ukunamathiselwa ne-resin ye-polyurethane engxenyeni yesundu, noma nge-resin ye-polyurethane engxenyeni yomunwe noma ngengubo ye-polyethylene ebusweni beglavu. Amagilavu ​​enziwe ngemicu ehambisanayo angakhipha ngokushesha ugesi omile onqwabelene ezandleni. Uhlobo lwesibili lwamagilavu ​​ane-polyurethane noma i-polyethylene enamathela ikakhulukazi akulula ukukhiqiza uthuli nogesi ongaguquguquki. Amagilavu ​​we-anti-static asetshenziselwa kakhulu ukuhlolwa komkhiqizo, ukuphrinta, imikhiqizo kagesi, amandla abuthakathaka, ukuhlangana kwezinsimbi zokunemba nomsebenzi wokuhlola wezikhungo ezahlukahlukene zocwaningo.
Okwesihlanu: Amagilavu ​​e-Welder
Amagilavu ​​e-Welder iyithuluzi lokuvikela ukuvikela ukushisa okuphezulu, insimbi encibilikisiwe noma izinhlansi ekushiseni esandleni ngesikhathi sokushisela. Izidingo zokubukeka kwamagilavu ​​e-welder ziqinile, umahluko phakathi kwemikhiqizo yebanga lokuqala neyesibili. Umkhiqizo osezingeni lokuqala udinga ukuthi umzimba wesikhumba ufane ngobuningi, ngobunono, uthambe futhi unwebe. Ubuso besikhumba buhle, bufana, buqinile, futhi abuhambisani ngombala, ngaphandle kokuzwa okunamafutha; umzimba wesikhumba untula ukuqina okugcwele, ingaphezulu lesikhumba liwugqinsi, futhi umbala ubamnyama kancane. Ibanga lesibili. Amagilavu ​​e-Welder enziwe kakhulu ngohlobo lwenkomo, i-pig tamarin noma isikhumba esinezingqimba ezimbili, futhi ahlukaniswe ngohlobo lweminwe emibili, uhlobo lweminwe emithathu nohlobo lweminwe emihlanu ngokuya ngohlobo lohlobo lomunwe. Amagilavu ​​we-Welder kwesinye isikhathi angasetshenziswa njengamagilavu ​​wokuvikela ukumelana nokushisa okuphezulu.
Uhlobo lwesithupha: amagilavu ​​we-anti-vibration
Amagilavu ​​we-anti-vibration asetshenziselwa ukuvikela izifo zomsebenzi ezibangelwa ukudlidliza okubangelwa ukudlidliza. Emahlathini, ezokwakha, ezezimayini, ezokuthutha kanye neminye imikhakha yamathuluzi okuphatha ngesandla afana namasaha amaketanga, imishini yokubhola futhi ethambekele ekunyakazeni kwezifo ezisemsebenzini - - "isifo somunwe esimhlophe." Lawa magilavu ​​afaka ukujiya okuthile kogwebu, i-latex kanye ne-interlayer yomoya endaweni yesundu ukumunca ukudlidliza. Ukujiya kwamaphakethe esundu neminwe, kukhulisa ivolumu yomoya, futhi kube nomphumela omuhle wokunciphisa, kepha kulula ukuthinta ukusebenza.
Okwesikhombisa: amagilavu ​​amelana ne-asidi ne-alikhali
Amagilavu ​​amelana ne-acid ne-alkali angahlukaniswa ngamagilavu ​​e-acid ne-alkali, i-plastic acid kanye nama-alkali amelana namagilavu, i-latex acid kanye namagilavu ​​amelana ne-alkali, i-acid efakwe ku-asidi kanye namagilavu ​​amelana ne-alkali, njll ngokusho kwento leyo. Kungumkhiqizo ovikelayo ukuvikela i-asidi nezinto ze-alkali ekulimaleni kwezandla. Amaphutha afana nesifutho seqhwa, ukuqina, ukunamathela nokulimala akuvunyelwe. Ikhwalithi idinga ukuhambisana ngokuqinile nezinhlinzeko ze- "Acid (Alkali) Gloves". Enye iglavu emelana ne-asidi ne-alkali kumele ingangeni emoyeni. Ngaphansi kwengcindezi ethile, akukho ukuvuza komoya okuvunyelwe. Amagilavu ​​angenawo amanzi namagilavu ​​we-antivirus angashintshwa ngamagilavu ​​amelana ne-asidi ne-alikhali, nawo futhi anomphumela omuhle.
Owesishiyagalombili: amagilavu ​​angamelana nowoyela
Amagilavu ​​angenawo uwoyela asetshenziselwa ukuvikela isikhumba samaglavu ezifweni ezahlukahlukene zesikhumba ezibangelwa izinto ezinamafutha. La magilavu ​​enziwe kakhulu ngerabha le-nitrile, i-chloroprene noma i-polyurethane. Abanye abantu abazwela ekuvuseleleni uwoyela namafutha kufanele basebenzise amagilavu ​​amelana no-oyela ukugwema i-dermatitis ebukhali, umqubuko, isikhumba esishwabene, isikhumba esomile, i-pigmentation, nezinguquko zezipikili.
Okwesishiyagalolunye: amagilavu ​​ahlanzekile
Amagilavu ​​angenaluthuli angavimbela ugesi womuntu ongonakalisi umkhiqizo ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, futhi wenziwe ngenjoloba yemvelo. Kungavikela umkhiqizo ekungcolisweni nasethonyeni lezinsalela zeminwe, uthuli, umjuluko namabala kawoyela ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, futhi uvikele umkhiqizo ngempumelelo. Amagilavu ​​avame kakhulu angenaluthuli emakamelweni ahlanzekile angamagilavu ​​e-polyvinyl chloride (PVC).
Uhlobo lweshumi: amagilavu ​​we-anti- X -ray
Amagilavu ​​e-Anti- X -ray angamagilavu ​​uqobo agqokwa ngabasebenzi be-X -ray, futhi enziwe ngenjoloba yomthofu ethambile engakwazi ukumunca noma inciphise ama-X-ray futhi inezakhiwo ezinhle zomzimba. Abasebenzi ababandakanyeka kuma-X -ray bayayidinga ngoba imvamisa bathola imisebe ye-X -ray futhi bayingozi kakhulu kubantu. Ama-X -ray angalimaza ukwakheka kwangaphakathi kweseli futhi abangele nomonakalo wempilo yonke kuma-molecule ezakhi zofuzo okunzima ukuwalungisa, futhi kulula ukudala umdlavuza. Inomphumela othile obulalayo kuma-leukocyte egazi lomuntu, okuholela ekwehleni kwesibalo, okuholele ekwehleni kokuzivikela komzimba, futhi kube lula ukugula.
Isikhathi Iposi: Jul-06-2020